महानगरपालिकातर्फ खाता खोल्ने को हुन् नागेश ? - NepalWatch
महानगरपालिकातर्फ खाता खोल्ने को हुन् नागेश ?
Previous News २०७९ असार १७ गते ८:११
‘अध्यक्षसँग सुत्केरी’ कार्यक्रम कति प्रभावकारी ?
नेपालवाच २०७९ जेठ ७ गते ८:११
काठमाडौं । प्रभावशाली अमृत अर्याल, डा. डिला संग्रौला देखि मेयर भीम पराजुलीलाई पछि पार्दै विराटनगरमा कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका नागेश कोइराला अन्ततः जितसम्म पुगेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा महानगरपालिकातर्फ पहिलो जित हात पार्ने सौभाग्य पनि उनै नागेशले पाएका छन् । एमालेका सागर थापालाई ८७१५ मतको भारी अन्तरले पराजित गर्दै नागेश मेयरमा निर्वाचित भएका हुन् । मेयरमा नागेशले ३०१७० र सागरले २१४५५ मत ल्याए ।
कांग्रेसको बलियो पकड रहेको मोरङमा अन्ततः नागेश कोइरालाले सानदार जित दर्ता गरेका छन् । अन्तिमसम्म मेयरका लागि डा. शेखर कोइरालाले नागेशको नाम लिएपछि सभापति देउवाले उनलाई टिकट थमाएका थिए । ६ महानगरपालिकामध्ये पहिलाे नतिजा अाउँदा नागेशले खाता खाेलेका हुन् ।
नागेश मोरङका युवा नेता हुन् । अहिले उनी मोरङको कांग्रेस उपभापति छन् । यस अघि उनी जिल्ला सचिव र कोषाध्यक्ष भएका थिए । जनप्रतिनिधिका रुपमा एकपटक पनि काम नगरी महानगरपालिकाका मेयरमै निर्वाचित हुन नागेश सफल भएका हुन् । उनी युवामाझ उनी चर्चित र लोकप्रिय रहेको बताइन्छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तिमसम्म पनि मेयरमा अमृत अर्याललाई अघि सार्न खोजेका थिए । त डा. शेखर कोइरालाको बलियो प्रभाव रहेको विराटनगरमा उनको अडानमै नागेशले टिकट पाएका थिए । कांग्रेस फुट्दा देउवा तिर लागेका नागेश १३ औं महाधिवेशन अघिसम्म त्यतै थिए । तर १३ औं महाधिवेशनयता भने उनी शेखर कोइराला निकट भएर काम गर्दै आएका छन् ।
नगर कार्यसमितिले मेयरका लागि सिफारिस गरेका सात जना नेतामा नागेशको नाम थिएन । उनको नाम सिफारिस नभएपछि शेखरले मेयरका लागि झन् देउवासामू दबाब बढाउँदै टिकट दिलाएका थिए । २०७४ सालमा भने कांग्रेसले दुई गठबन्धनलाई हराएर मेयर र उपमेयर दुवै जितेको थियो ।
यसपटक मेयर कांग्रेसले जित्दा उपमेयरमा एमालेकी इन्दिरा कार्की विजयी भएकी छिन् । जसपाका अमरेन्द्र यादवलाई ११ हजार चार सय ६८ मतले पराजित गर्दै कार्की विजयी भएकी हुन् । सत्ता गठबन्धनसँग तालमेल गरे पनि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा विराटनगरमा भारी मतान्तरले पराजित हुन पुगे ।
विराटनगरमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार ५७१० मतान्तरले विजयी भएका थिए । कांग्रेसका भीम पराजुली २३०३१ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । एमालेका विनोदप्रसाद ढकालले १७ हजार ३२१ मत ल्याएका थिए । संघीय समाजवादी फोरमका उमेशकुमार यादवले १४ हजार ९५८ मत ल्याएका थिए ।
विराटनगरमा फराकिलो अन्तरसहित मेयरमा कांग्रेस, उपमेयरमा एमाले विजयी
एउटै नम्बरका दुई मोटरसाइकल प्रकरण : ‘सक्कली’ सवारीधनी भेटिए
कांग्रेसमा पनि नयाँ मन्त्रीको खोजी ! को–को छन् आकांक्षी ?
यी हुन् पुरुषको नामको लाइसेन्स आफ्नो नाममा निकाल्ने महिला सैनिक
शेखर समूहको भेलामा नेताका उदास चेहरा [तीन तस्बिरसहित]
फेरि मन्त्री फेर्ने तयारी, को जाँदैछन् ? को आउँदैछन् ?
गगन थापा प्रधानमन्त्री हुँदा कस्तो होला प्रधानमन्त्री कार्यालय ?
जब एउटै नम्बरका दुई मोटरसाइकल चालकको भेट भयो, त्यसपछि के–के भयो ?
नेकपा एसबाट नियुक्त भएका नवनियुक्त चार मन्त्रीमा गैरसांसददेखि एकै जिल्लाका दुई जनासम्म
सडकमा मकै बेच्नेलाई नगर प्रहरीको लछारपछार (भिडियोसहित)
‘घरमा बोराका बोरा चामल राख्नेले फोहर पनि दुईदिन राख्न सक्नुपर्छ’
मनसुन सक्रिय भएपछि विपद् सतर्कता अपनाउदै जुम्लाका स्थानीय तह
न्यूयोर्कका सार्वजनिक स्थलमा बन्दुक बोक्न निषेध
पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड :अरुणा र प्रदीप वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी
नेकपा एसका अध्यक्षलाई भारतीय राजदूतले भेटे